बाथ रोगीहरुले सुरुवाती अवस्थामै उपचार गरिहाल्नु पर्छ ः डा. दिपा शाह-Setoghar
बाथ रोगीहरुले सुरुवाती अवस्थामै उपचार गरिहाल्नु पर्छ ः डा. दिपा शाह
हातखुट्टाका जोर्नीहरू दुख्ने, सुनिने तथा बिहानीपख अररो हुने यसका प्रमुख लक्षण हुन्। यति मात्र नभई यसले ज्वरो आउने, आलस्य हुने, चाँडै थाक्ने तथा गल्नेजस्ता लक्षण पनि देखाउन सक्छ साथै जोर्नी मात्र नभई यस रोगले शरीरका विभिन्न अंगमा असर देखाउन सक्छ । छालामा निको नहुने घाउ आउने, आँखा रातो हुने तथा दुख्ने, फोक्सो जाली पर्ने र स्वाँस्वाँ आउने, फोक्सो बाहिर पानी जम्ने यसका अरू लक्षण हुन् ।
पछिल्ला बर्षहरुमा बाथरोग पनि मुटु रोग, मधुमेह, थाइराड जस्तै विकराल एवं जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । खासगरी अप्राकृतिक जिवनशैली, श्रम गर्ने संस्कारको कमी र भद्धा भोजन अनि वंशानुगत गुणका आदिका कारण हालका बर्षहरुमा नेपालमा बाथ रोगीहरुको सङख्या बढदै गइरहेको हाम्रो पनि अनुभव छ । बाथ रोगीहरुले सुरुवाती अवस्थामै आवश्यक उपचार गरिहाल्नु अत्यन्त बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा यसको असर बहुआयामिक हुनसक्छ । हामीले बाथकै सेरोफेरोमा गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा बाथ रोग सेन्टर केन्द्र सातदोबाटोमा कार्यरत वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ डा दिपा शाहसँग थप जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ ।
खासमा के हो बाथ राेग ?
संक्षेपमा भन्दा शरिरमा रोग निरोधक शक्तिले आफनै शरिरका अंगलाइ असर गरेर बाथ रोग लाग्नेगर्छ । सामान्यतया बाथ रोगले शरीरका जोर्नी र यस वरपरका संरचनाहरु दुख्ने, सुन्निने र अररो भइ राम्ररी चलमलाउन नसक्ने हुन्छ । जोर्नी र जिउ दुख्ने समस्याको एक प्रमुख कारण भनेकै बाथरोग हो । बाथरोग १ सय भन्दा बढी प्रकारका हुन्छन् । जसमध्ये मुख्यतया ¥युमटोइड आरथ्राइटिस ( आम बाथ), ओस्टीयो आरथ्राईटिस ( जोर्नी खिइने बाथ ), युरिक एसिडको बाथ ( गाउट ) स्पोण्डीलो आरथ्राईटिस ( ढाडको बाथ), ¥युमारिक फिबर ( मुटुजन्य बाथज्वरो ) र लुपस ( एस.एल.इ.) भास्कुलाइटीस (नशाको बाथ) केटाकेटीमा हुने बाथ (झुबेनाइल आरथ्राइसिस) आदि मुख्य रुपमा देखिने बाथ हुन् ।
बाथ रोग कसलाई र कुन अवस्थामा लाग्छ ?
ब्लडप्रेशर घटबढ हुने कारण बाथरोगले प्राय जाडोमा बढी असर पु¥याउने गर्छ । बाथ रोग किटानुकै कारण हुने रोग भने होइन । तर यो बढी जाडो यामबाट सुरु हुन्छ । यो रोग ब्लडपेशर, मधुमेह भएको मान्छेहरुमा धेरै देखिन्छन । जस्तो की युरिक एसिड रोग चाँही जसलाइ उच्च रक्तचाप छ, जसको मोटापन धेरै छ त्यस्तोहरुमा यो रोग धेरै देखिने गर्छ । यसरी अरु रोग र बाथ रोगमा अन्र्तरसम्बन्ध रहने गर्दछ ।
बाथ रोग उपचार नगरे स्लो पोइजन सरह हुन्छ । जस्तो हृदयघात तथा पक्ष्यघात हुदाँ मान्छे आजको भोली मर्ने सम्भावना हुन्छ । तर बाथ रोगमा आजको भोली नै मान्छे मरिहाल्ने हुदैन । तर छिटै उपचार नगरे यसले मान्छेलाई अपाङग बनाउने गर्छ ।
बाथ रोगका मुख्य लक्ष्यणहरु के के हुन त ?
यसका लक्षणहरु यस्ता रहेका छन् ।
१.हातगोडाका औंलाहरु दुख्ने, सुन्निने ।
२.विहान उठने बेलामा हात गोडा दुख्ने, अर्रो र कक्रक्क हुने ।
३.गोडाका बुढी औंला, गोली गाँठा र अन्य जोर्नीहरु टन्किएर दुख्ने, सुन्निने
४.हड्डी खिइएको,घुँडा दुख्ने र सुन्निने ।
५.ढाड ,कम्बर दुख्ने ,जिउ गल्ने, धेरै थकान लाग्ने ।
६.पिडौला, कुर्कुच्चा र पैताला पोल्ने, कटकट खाने तथा नशा झमझम गर्ने ।
७.छालामा घाउ खटिरा आउने, निला निला डाम देखा पर्ने ।
८.पानीमा काम गर्दा छालाको रङ परिवर्तन हुने जस्ता बाथरोगका लक्षणहरु मान्न सकिन्छ ।
बाथ रोगमा निराकरणमा त खानपान धेरै असर पार्छ रे नि है ?
धेरैजसो बाथरोगमा चिसो, अमिलो, खाँदेको पुरानो अचार बाहेक खाना बार्न आवश्यक हुदैन । तर युरिक एसिड बाथमा खुट्टाको बुढी औंला रातो भएर दुख्ने, सुन्निने हुन्छ । यो बाथरोगमा बार्नुपर्ने युरिनयुक्त खाना जस्तै रातो मासु, समुन्द्री खाधान्य, रक्सी तथा वियर, कोल्ड ड्रिंक्स, टोफु, भटमास, जंकफुड, कुरीलो, च्याउ अचार, तामा, पालुङ्गो, काउली आदि युरिक यसिडलाई बढाइदिन्छ । त्यसैले युरिक यसिड भएका विरामीले यी खानेकुरा सकेसम्म बार्नुपर्छ ।
बाथरोग नयाँ रोग भने अवश्य पनि होइन । यी रोगहरु त वर्षौं पहिलेदेखि रहेका भए पनि सायद अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा पहिचान मात्र हुन नसकेको अवस्थामा थिए । पछिल्लो समयमा यस रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरु बढ्दै गएका कारण आगामी दिनमा बाथ रोगको राम्रो निदान, निरुपण र उपचार गर्न सकिन्छ तर समयमै उपचार भने गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु ।